अब कोरोना भाइरसको परीक्षण घरबाटै गर्न गुगलले एक नयाँ वेबसाइट बनाउँदैछ ! – Life Nepali
अब कोरोना भाइरसको परीक्षण घरबाटै गर्न गुगलले एक नयाँ वेबसाइट बनाउँदैछ !
काठमाडौँ। कोरोना भा’इरसबाट विश्वभरका मानिसहरु आक्रान्त भइरहेका बेला यसको परीक्षण अब घरबाटै गर्न मिल्ने गरीको तयारी सुरु भएको छ । कोरोनाभाइरसको परीक्षणका लागि गुगलले एक नयाँ वेबसाइट बनाउँदैछ । यो वेबसाइटले काम गरेमा कोरोनाको परीक्षणबारे आवश्यक जानकारी घरमै मिल्ने दाबी गरिएको छ । गुगलको यो वेबसाइट एक भाइरस ट्राइएज टूल हो । यसलाई गुगल अन्तरगतको कम्पनी वर्लीद्धारा बिकसित’ गरिँदैछ, जुन अल्फाबेटको एक स्वास्थ्य’ निरिक्षणको इकाई हो । यो वर्लीको प्रोजेक्ट बेसलाइनको हिस्सा हुनेछ ।
गुगलको यस भाइरस परीक्षण वेबसाइट हाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । सोमबार पहिलो पटक यसलाई सन फ्रान्सिस्कोको तटिय क्षेत्रका लागि लन्च गरिनेछ । शुक्रवार’ ह्वाइट’ हाउसको’ रोज गार्डेनमा भएको प्रेस कन्फ्रेन्समा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गुगल हाल को’रोना भा’इरसको परीक्षणका लागि एक वेबसाइटमा’ काम गरिरहेको र यसमा गूगलको १,७०० इन्जिनियरहरु’ काम गरिरहेको बताएका थिए । यो वेबसाइटले मानिसहरुमा’ को’रोना प’रीक्षण गर्नुपर्ने आ’वश्यकता’ रहे’ नरहेको पत्ता’ लगाउन’ सहयोग गर्ने’ बताएका थिए ।एजेन्सीकाे’ सहयाेगमा’
कोरोनावि’रुद्ध खोपको पहिलो’ मानव परीक्षण अमेरिकामा सुरू हुँदै’
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस स’ङ्क्रमणबाट जोगाउन विकास गरिएको खोप पहिलो पटक मानवमा परीक्षण हुन लागेको छ । अमेरिकी सरकारले’ उपलब्ध’ गराएको खर्चमा’ सुरु गर्न लागेको यो परीक्षणमा ४५ जना वयस्क अमेरिकी स्वयंसेवीहरू सहभागी हुँदैछन् । खोप परीक्षण अमेरिकाको सीयाटलमा’ आज हुँदैछ । ती स्वयंसेवीहरूले सङ्क्र’मित नभईकनै खोपका विभिन्न मात्रा लिनेछन् । उक्त खोपमा वास्तविक’ कोरोनाभाइरसको कुनै अंश छैन।
त्यसमा मेसिन्जर आरएनए (mRNA) को सानो भाग भएको बताइएको छ । बिरामीको कोषलाई भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउन वा रोगवि’रुद्ध ल’डेर निको पार्न आवश्यक प्रोटीन उ’त्पादन गर्न स’क्रिय बनाउने वै’ज्ञानिकहरूको योजना छ । पहिलो चरणमा को’रोना भाइस वि’रुद्धको भ्या’क्सीनको मात्राले प्रतिरक्षा प्र’णालीले कुनै प्र’तिक्रिया जनाए वा नजनाएको जाँच हुनेछ । परीक्षण गर्न लागिएको भ्या’क्सीनलाई नाम mRNA-1273 नामकरण गरिएको छ । त्यसलाई मोडेर्ना नाम गरेको निर्माताले बना’एको छ । त्यो नयाँ परीक्षण सीयाटलको का’इसर प’र्मानन्ट वाशिङ्टन हेल्थ रि’सर्च इन्स्टिट्यूटमा हुन लागेको हो । -बीबीसी
Previous अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने हरेकले १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने …
Next अहिले सम्म नेपालमा कसैलाई पनि कोरोना भा’इरसको सं’क्रमण देखिएको छैन